Madaxweynaha oo ay wehelinayaan Saraakiil sarsare oo Ciidamada Federalka ah OO Ka degay Magaalada Qabridahar. - Cakaara News
Madaxweynaha oo ay wehelinayaan Saraakiil sarsare oo Ciidamada Federalka ah OO Ka degay Magaalada Qabridahar.
Qabridahar(CakaaraNews) Sabti August 10,2013.Waxaa maanta u kicitimay Magaalda qabridahar wafti balaadhan oo uu hogaaminayo madaxweynaha DDSI Mudaer Cabdi Maxamuud Cumar oo ay wehelinayeen Saraakiil Sar-sare oo Ciidamada DFI ah. Ujeedada Booqshada Waftiga madaxweynaha Magaalda Qabridahar ayaa ku wajahan labo qodab oo ay ka mid yihiin 1-Dardargalinta hawlaha dhamaystirka Garoonka diyaaradaha iyo wadada laamiga ah ee magaalada qabridahar oo ay ku baxayso 100,000,000 (boqol-milyan). 2-Sidii looga saari lahaa Xeryaha Ciidamada Federaalka eek u dhexyaala Gudaha magaalada.
Ujeedooyinka ugu waawayn ee laga leeeyaay in xeryaha Ciidamada laga dhex-saaro magaalooyinka ayaa ah sidii ay magaalooyinku u fidi lahaayeen isla markaana looga samaysan lahaa maalgashi kor u soo qaada bilicda iyo quruxda magaalooyinka. Xeryaha ciidamada ayaa magaalooyinka laga saarayaa ilaa 10km oo ka baxsan magaalada,iyadoona hada ka hor Magaalada Jigjiga iyo Dh/buur laga dhexsaaray magaalada xeryihii ciidanka federaalku ay ku lahaayeen.
Madaxda iyo saraakiisha sarsare ee Ciidamada DFI ayaa garwaaqsaday in laga dhexsaaro ciidamada magaalooyinka iyadoona miisaaniyada ku baxaysa ama magdhaw dhismayaasha ay Xukuumada DDSI Bixinayso hada ka horna bixisay.